3D Yakavezwa Dombo-Rusvingo & Art
Marble Mvura-jeti Inlay
Marble Furniture-Tafura & Art
Iko kushandiswa kwemidziyo yemuchadenga kuri kugara kuchiunza izvo zvitsva, uye zvakasiyana siyana zvekuvakisa zvakapinda zvishoma nezvishoma mumuono wedu. Runako rwemabhuru haruna kudzikira kubva panguva dzekare. Iyo marble yemamiriro akanaka ekushongedza inoshongedza, kungofanana neicho hunyanzvi icho hunhu hunova, hunogona kuenderana mune yakazara imba hembe kwazvozvakasikwa mukati, zvinoratidza zvakachena uye zvitsva uye zvisina hunhu husina kunaka.
Sarudza machena kuti uite terevhizheni yekumadziro, inogona kusimudzira kirasi yeiyo yakazara imba yekugara ipapo. Kune akareruka uye akatsetsenuka mapatani kuratidza pfungwa yehutongi, kune zvekare kaleidoscopic mutsinga kuunza yakasimba yekuona maitiro.
Kicheni neresitorendi ndiko kunonyanya kunhuwirira kwemoto munzvimbo, kona yega yega izere nekuravira chaiko kwemusha. Nemarble kuti ishandise chimiro chemuchadenga, kuumba yakanaka uye yekudyira yekudyira mamiriro, inowoneka fashoni yevechidiki, izere nesimba.
Iko kuumbwa kwemarble nekumwe kuchinjika pavhu chena zvakangofanana neiye inoyerera inki, iyo yakafanana nezviyo zvechisikigo, ichiita kuti marble ipe nzvimbo yacho mhando yehunhu hwekunaka hwekunzwa.
Marble yekugezera, avo vanosvika panzvimbo yeziso izere nemutengo unodhura usinganzwisisike.Iye ekushongedza enzvimbo, kana akazara kupa, yakasarudzika inogara inofadza yemasikirwo emarble, akambopararira kuva anotyisa.
Marble yakakosha uye yakasarudzika nemasikirwo echisikigo uye zvisaririra zvenguva.Kana iwe uchida imwe yemhando yepamusoro yekushongedza imba unogona kusarudza machena ekushongedza kwemukati.Mavara emarble haakusiye iwe pasi.
Post nguva: Zvita-09-2020
Xiamen Mangwanani Mabwe Stone Co., LTD
Kamuri 1103, Kuvaka B, Hengyuan Elite Mansion 1985, Mupu Road 101, Huli Dunhu, Xiamen, China